Waa maxay VPN Best ee Windows? - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » QODOBO • kale • Featured • TECH & TELECOM • download Waa maxay VPN Best ee Windows?
Waa maxay VPN Best ee Windows?
TELES RELAY 11 June 2019
Waa xaqiiqo aan la aqbali karin oo ah in Windows ay tahay nidaamka ugu badan ee loo adeegsado adduunka. Windows ma aha oo kaliya loo isticmaalo kombiyuutarada casriga ah laakiin waxaa sidoo kale lagu rakibay inta badan kombiyuutarada gaarka loo leeyahay sababtoo ah fududeyn iyo sahlan isticmaalka marka loo eego nidaamyada kale ee hawlgalka. Tani waxay ka dhigaysaa nidaamka hawlgalka Windows inuu yahay bartilmaameed muhiim ah oo loogu talagalay kuwa jabhada sameeya oo ka dhigaya mid u nugul weerarrada internetka. Sannad kasta, waxaanu joognaa tiro badan oo cyberattacks ah, kuwaas oo u baahan amniga nacasta nidaamkeenna si aan u ilaalino xogtayada.
Waxaa jira laba nooc oo software ah oo la heli karo: antivirus iyo VPN (shabakadaha gaarka loo leeyahay). Nidaamku wuxuu bixiyaa sifooyin ammaan ah oo ka ilaaliya nidaamkaaga weerarada cyber, laakiin waxaa la ogaaday in dadku bilaabeen in ay ka fogaadaan inay ku rakibaan antivirus nidaamkooda sababtoo ah kakanaanta kobcinta iyo Xaddidnaanta xaddidan. Halkaan waxaa ah VPN oo ku siinaya amniga iyo helitaanka aan xadidneyn, taas oo kuu ogolaaneysa in aadan ku qarsooneyn xogtaada, laakiin sidoo kale inaad hesho waxyaabaha xadeysan ee wadankaaga hooyo. Sababta oo ah goobtaada iyo aqoonsigaaga waa la qariyey iyadoo la adeegsanayo VPN, kormeerka qarsoodiga ah iyo bangiga oo ammaan ah waa lacag badan.
Software Windows VPN nambarada iyo aqoonsiga dhammaan hawlahaaga internetka. Tani waxay muhiim u tahay wadaagista P2P sidaa daraadeed ISP-gaagu ma soo gudbin karo talaallooyinka iyo waxyaabo kale. Waxay sidoo kale kaa ilaalineysaa shabakadaha Wi-Fi-ga ee aan ilaalin ee xitaa xitaa waxay gooyaan boggaga internetka iyo adeega galka-galka sida Netflix.
PureVPN, VPN ee ugu da'da weyn iyo kuwa ugu caansan ee isticmaala isticmaalayaasha in ka badan laba milyan, waxay bixiyaan muuqaal gaar ah, sida Internetka Kill Switch, kaas oo damaanad qaadaya ammaanka xiritaankaaga, xitaa haddii la joojiyo. PureVPN waxay sidoo kale bixisaa xalka dhibaatooyinka DNS caadi ah ee Windows 10. Hoosudhaca DNS wuxuu dhacaa marka halis nabadgelyo uu keeno qalabkaaga si loo wareejiyo codsiga DNS-kaaga ISP's DNS server halkii uu adeegsan lahaa VPN. PureVPN wuxuu xaqiijiyaa in codsigaaga DNS uusan kuugu gudbin ISP-gaaga, taas oo yareyneysa halista suntan.
Marka lagu daro qaar ka mid ah sifooyinka kor lagu sharaxay, PureVPN wuxuu bixiyaa dammaanad dammaanad ah oo ka hooseysa maalmaha 31, taas oo macnaheedu yahay in ka dib markii aad ku qorto, waxaad yeelan doontaa bilooyin 1 si loo tijaabiyo loona falanqeeyo adeegyada PureVPN. Haddii aadan ku qanacsanayn, waxaad si fudud u diidi kartaa oo lacagtaada dib ugu noqon kartaa. Tani waxay kordhisaa heerka kalsoonida ee PureVPN ay u fidiso macaamiisheeda, taas oo suurtogal ah keliya haddii aanad isku dayin tayada oo marwalba siinayso macaamiishaada 24 / 7 adoon joojin.
Nicolas Yenoussi: "In Yaoundé, waayo-aragnimadii Benin ee qaabaynta digitalization ee maamulka canshuurtu wuxuu abuuray farxad ku filan"
Gawaarida baabuurka ee fasaxyada qoyska oo guuleysta ee Morocco
Khariidadda waddada Laurent Jalabert - VIDEO
Waxay ka leexdeen MSN Messenger si ay u soo diraan sheeko, laakiin si faahfaahsan - Diario San Rafael
Marka Yvenie Bawlos uu ka hadlo hadal dhowr ah
Paolla Oliveira waxay tagtaa saldhiga bilayska si ay u soo tebiyaan fiidiyowga sawirrada - Amazon Fact - xnxx
DADKA & LIFESTYLE4,138